हिंसाको सिलसिलामा यसरी ‘ब्रेक’लाग्यो |
प्रकाशित मिति :2020-06-02 15:16:23
बैतडी । बैतडीको पुरचौडी नगरपालिकाकी उनी १६ वर्ष पुग्नै लागेकी थिइन् । घरमा विवाहको प्रस्ताव आयो । ९ कक्षामा पढिरहेकी उनलाई बिहे गर्ने मन पटक्कै थिएन । तर निम्न आर्थिक अवस्थाका बुबाआमाले छोरीको बिहे गरिदिएपछि आर्थिक भार कम हुने आसामा छोरीको बिहेको प्रस्ताव स्वीकार गरे ।
केटाको खानदान राम्रो । बानी व्यहोरा पनि ठिकै । सदरमुकाम आसपासमा घर । अरुको लहलहैमा लागेका छोरीले भागेर बिहे गर्नुभन्दा कन्यादान गरिदिए पूण्य पाइने सोच । केटी पक्षले छोरीका लागि खोज्ने यति नै त हो नि ! उनका बुबाआमाले पनि यो भन्दा धेरै सोचेनन् । तर प्रस्ताव पक्कापक्की हुनु अघि एउटा प्रस्ताव राखे,–छोरीले पढ्न पाउनु पर्छ । केटा पक्ष राजी भए । उनको बिहे भो ।
बिहेको केही समयसम्म सबै कुरा ठिकठाक थियो । उनी पढाईलाई निरन्तरता दिन माइतीमै बसिन् । १० कक्षा पनि पास गरिन् । ११ मा भर्ना भएकी उनलाई अब धेरै माइतमा बस्न हुदैन भनेर घरमा ल्याइयो । घरमा आएको ३/४ महिनासम्म श्रीमान्, परिवार सबैको माया पाइन् । उनी खुशी थिइन् । तर त्यो खुशी बिस्तारै निमोठिन थाल्यो । श्रीमान्ले बिनाकारण दोष लाउने, गाली गर्ने, कुटपिट गर्ने गर्न थाले । परिवारले पनि त्यसमा मलजल गर्नेबाहेक राम्रो व्यवहार गर्न छाडे ।
यही बीचमा उनी गर्भवती भइन् । उनलाई लागेको थियो,–दुई जिउकी भएपछि यातना कम हुन्छ कि ! श्रीमान्ले सन्तानको लागिी पनि आफूलाई माया गर्छन् कि ! तर त्यसो भएन । बरु यातनाको स्तर बढ्न थाल्यो । घास, दाउरा, मेलापात, घरको काम त थियो नै, दिनभर थाकेको दुई ज्यानको शरीरले रातभर श्रीमान्को यौन यातना सहन पनि तयार हुनुपर्ने । नमान्दा क्रूर तरिकाको पिटाइ । बरु उनी श्रीमान्ले जतिबेला, जसरी यौन सम्पर्क गर्न चाहान्छन्, त्यसरी नै तयार हुन थालिन् । त्योबाहेक उनीसंग बिकल्प पनि त थिएन ।
पोषिलो खाना र थप स्याहार चाहिने गर्भावस्थामा उनले पेटभर खानसमेत पाइनन् । पेट बढ्दै जाँदा बढ्दै गएको कुटाई सहनै नसकेर माइत गइन् । श्रीमान्ले ‘मबाट गल्ती भयो । अब यस्तो हुन्न । घर जाऔं’ भनेर फकाए । माफी मागे । उनको मन पगिल्यो । आमाबुबाले पनि बिहे गरेकी छोरी माइतीमा बस्नु हुन्न भन्दै ज्वाइँसंगै जान आग्रह गरे । उनी श्रीमान्को घर फर्किइन् । तर जब घर पुगिन्, यातना उस्तै । माइत जाने भएकी भन्दै गाली र मुड्कीका प्रहार बढे ।
हेला, अपमान र यातनाका बीच उनले दुई छोरा जन्माइन् । तर श्रीमान् र परिवारको मन पग्लिएन । उनले त के उनका छोराहरूले पनि परिवारको माया पाएनन् । आमा काममा गएको बेला भोकभोकै बसे । अहिले उनको पहिलो सन्तान ४ र अर्को २ वर्षका छन् ।
‘म जस्तो अभागी र दुःखी त कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो । हुँदै नभएको कुरामा समेत निहुँ खोजेर पिट्ने श्रीमान् र श्रीमान्लाई कुट्न उकास्ने सासूससुराको व्यवहारले कतिपटक जीवनसंग हार खाएँ ।’ उनले सुनाइन्, ‘पिडा सहेर पनि उनलाई घघर टुट्नु हुँदैन । घर छोड्दा सबैको हेलामा परिन्छ भन्ने लागेरै यतिसम्म सहें ।’ तर अति भएपछि भने के गर्नु त ? अन्ततः ज्यान जोगाउनै लागि भए पनि उनले कदम चाल्नु पर्यो । उनी न्यायका लागि प्रहरीमा जान थालिन् । श्रीमान्ले त्यहाँ पनि त्यस्तै गरे । माफी माग्ने । आफू सुध्रिएको नाटक गर्ने । अनि सबैले घर जान दवाव दिने । घर गयो, फेरि उही पारा । ‘मलाई प्रहरीकोमा पुर्याउने तैँ होइनस्’ भन्दै थप यातना । प्रहरीकोमा जाने, श्रीमान्लाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने, छोड्ने यो प्रक्रिया करिब एक वर्ष चल्यो ।
घरेलु हिंसाको सिलसिला नरोकिएपछि अधिकारकर्मीको सहयोगमा उनी जिल्लामा रहेको सेफ हाउस र एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)मा पुगिन् । उनलाई ज्यान जोगाउन मुस्किल भो । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ बस्न पर्ने अवस्थासम्म आयो ।
उनको पीडा देखेपछि जिल्लामा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले उनलाई रोजगारीको लागि पहल गरे । तत्कालीन जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जगदिशचन्द्र विष्टले एक सरकारी कार्यालयका काम गर्ने अवसर जुराइदिए । अहिले उनी त्यहाँ कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गरिरहेकी छिन् ।
काम गर्न थालेपछि उनी घर फर्किइन् । परिवारको व्यवहार सुध्रिएको थिएन । बरु उनले कमाएको पैंसा श्रीमान्ले डराई, धम्काई गाँजा अत्तरमा सक्न थाले । यो सहन नसकेपछि उनले दुई महिना अघि घर छोडेर एक्लै बस्ने निर्ण गरिन् । छोराहरूलाई माइतीमा राखिन् । आफू सदरमुकाममा कोठा लिएर बस्न थालिन् । अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हालिन् । उनको मुद्दा अलालतमा गएको छ । फैसला हुन बाँकी छ ।
अहिले उनले सुखको सास फेर्न पाएको महसूस गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘करारको जागिर भएकाले कतिबेला सकिन्छ र छोराहरूलाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता छ । नत्रभने हिंसा सहेर बस्नु भन्दा एक्लो जीवन सुखी छ । यस्तै बस्छु । बरु आफ्नो कानूनी अधिकारका लागि लड्छु ।’
२०७२ सालमा जिल्लाको मेलौली नगरपालिकामा पहिलो पटक सडक पुगेपछि गाउँलेहरूमा खुशीको बहार आयो । अब जिल्ला सदरमुकाम र अन्य ठाउँमा पुग्न पैदल हिँडनु पर्दैन, हाम्रो गाउँ पनि सडक सञ्जालसंग जोडियो भनेर हर्षबढाई भो । तर उनको जिन्दगी त्यही सडक पुगेपछि गञ्जागोल भो । जुन कुरा सायदै कसैले सोचेका थिएनन् ।
सानैमा आमाको मृत्यु भो । बुबाले दोस्रो बिहे गरे । १३ वर्षको उमेरमैै बुबा र सौतनी आमाले कल्पनाको बिहे छिमेकको गाउँमा गरिदिए । आफ्नै अभिभावकका लागि बोझ भएपछि बिहे नामको बन्धनमा बाँधिदिएकी उनीमाथि श्रीमान्को घरमा कुनै इज्जत मिलेन । बिबाहका मूल्य मान्यता नै नबुझेकी उनलाई शुरुबाट नै अनेक बहानामा दुःख दिन थालियो । तर पनि कलिलो दिमागले मुक्तिको विकल्प पहिल्याउन नसकेपछि जेनतन सहेकै थिइन् । बिहेको एक वर्षपछि त श्रीमान् र सासूससुराले घरबाटै निकालीदिए ।
गाडी चालकले उनलाई अत्तरियामा अर्कै गाडीवालाको जिम्मा लगाइदिए । उनले पनि केही दिन आफैसंग राखेर पटकपटक बलात्कार गरे । त्यसपछि अर्कै गाडीवालाको जिम्मा लगाए । यसरी एकपछि अर्को गर्दै गाडी चालकले उनलाई यस्तो जञ्जालमा फसाए कि त्यहाँबाट कसरी उम्किने सोच्नै नपाई उनी अर्कैसित हुन्थिन् । त्यही सिलसिलामा उनलाई दाङको घोराही पुर्याइएको रहेछ । एक महिनापछि उनी मेलौली पुगिन् । तर त्यो बेलासम्म उनले आफैलाई बिर्सन थालिसकेकी थिइन् । पटकपटक, फरकफरक व्यक्तिको यौन यातनाको शिकार भएपछि उनले आफूलाई सम्हाल्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो ।
१४ वर्षको उमेरमा बिहे गरेको घरबाट निकालिएपछि उनी माइतीघर फर्किइन् । तर माइतीमा पनि घर खान सकिन भन्दै बस्न दिइएन । उनका बिकल्पका सबै बाटाहरू बन्द भए । अनि उनी मेलौली बजारमा होटलमा भाँडा माझ्ने र टाढाबाट पानी बोक्ने काम गरी दिनहरू बिताउन थालिन् ।
मेलौलीमा सडकसंगै सवारी साधन पुगिसकेका थिए । एक दिन एकजना गाडी चालकले गाडी चढेर घुम्न जाने प्रस्ताव राखे । सधैं होटलमा देखिरहने व्यक्तिले यसो भन्दा उनले अन्यथा सोचिनन् । पहिलो पटक गाडी चढ्न पाउने भएपछि खुशी हुँदै गाडी चढिन् । तर त्यो खुशी धेरै बेर टिकेन । मेलौलीबाट छुटेको गाडी अलि पर पुर्‍याएपछि गाडी चालकले बलात्कार गरे । मेलौलीदेखि कैलालीको अत्तरियासम्म पुग्दा उनी कतिपटक बलात्कृत भइन् उनलाई नै थाहा भएन ।
उनको दिमागले पनि राम्रो संग काम गर्न छोडिसकेको थियो । यसै अवधीमा उनको पेटमा बच्चा बसिसकेको थियो । तर उनी कसको बच्चा भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा पनि थिइनन् ।
केही महिनासम्म पुरानै होटलमा जुठा भाँडा सफा गर्ने गरेपनि गर्भमा रहेको बच्चा बढ्दै गएपछि होटलबाट पनि निकालिइन् । त्यहि सबैसंग मागेर खान थालिन र मेलौलीमै रहेको एक पुरानो भत्किएकोे घरमा बस्न थालिन् । गर्भवती भएको र सुत्केरी हुनसक्ने कुरा नजिकै रहेको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको जानकारीमा आएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले सबै स्थानीय सरोकारवाला र आफन्तसंग सम्पर्क गर्दा पनि आफन्त सम्पर्कमा आएनन् । २०७२ साल फाल्गुन २३ गते उनले केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा छोरी जन्माइन् । फाल्गुन २४ गते आमा र शिशु दुवैलाई केशरपुर मेलौलीबाट जिल्ला अस्पताल ल्याइयो । त्यतिबेलासम्म पनि उनको मानसिक अवस्था ठिक थिएन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तत्कालीन् महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) को पहलमा २८ दिनपछि उनलाई कञ्चनपुरस्थितसेफ हाउसमा पठाइयो ।
यही अवधिमा यू्एनएफपीएको सहयोग र महिला तथा बालबालिका कार्यालय पाटनको समन्वयमा पाटन नगरपालिकामा सुरक्षित आवास गृह स्थापना गरियो र उनलाई कञ्चनपुर सेफ हाउसबाट पाटनको सेफ हाउसमा ल्याइयो । नियमित प्रदान गरिएको मनोसामाजिक परामर्शले गर्दा उनी पूर्ण रुपमा ठिक भएकी छन् ।
स्थानीय निकायका जनप्रतिनि र सेफहाउसको समन्वयमा उनी तीन वर्षदेखि एक अस्पतालमा काम गरिरहेकी छन् भने छोरी नीजि विद्यालयमा पढिरहेकी छन् ।
सानैमा आमा गुमाउनु परेपछि दोस्रो बिहे गरेर सौतेनो भएका बुबाको बेवास्ताका कारण बालविवाह र बलात्कारको चञ्गुलमा फसेकी उनले सबैको सहयोगले नयाँ जीवन पाएको अनुभव गरेकी छन् ।
उनी सानै छँदा बुबाआमाको मृत्यु भयो । परिवारमा दाजुभाउजू मात्रै थिए । उनीहरूको पनि आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो । त्यसैले बाल्यकाल निकै कष्टसंग बितिरहेको थियो । परिवारमा उनलाई सहयोग र माया गर्ने कोही थिएनन् । अनि उनी अरुको लहलहैमा १६ वर्षको उमेरमै भागीविवाह गर्न पुगिन् ।
बिहेपछि श्रीमान्को घरमा पनि उनलाई राम्रा भएन । विवाह दर्ता र नागरिकता बनाइदिनुपर्यो भन्दा श्रीमान्ले दिनहुँजसो झैझगडा र कुटपिट गर्न थाले । दुई छोरीसहित उनलाई घरमा बस्न समस्या हुन थाल्यो । श्रीमान् र परिवारको रातदिनको किचलोले उनी जीवनसंग निरास हुन थालिन् । जिन्दगी बेकार र अर्थहिन लाग्न थाल्यो । उनी बिस्तारै आफैलाई बिर्सन थालिन् । के ठिक, के बेठिक छुट्याउन नसकन्े हुन थालिन् ।
उनको अवस्था थाहा पाएपछि चिनेका व्यक्तिले उनलाई जिल्लास्थित सेफ हाउसलमा पुर्याए । घरेलु हिंसाका कारण मानसिक रुपमा विक्षिप्त उनलाई त्यहाँ औषधिपोचार र लामो अवधीकोे मनोविमर्श सेवा दिइयो । जसले गर्दा उनको शारीरिक र मानसिक अवस्था ठिक हुँदै गयो ।
आफूलाई ठिक भएपछि उनले हिंसा गर्ने श्रीमान्विरुद्ध जिल्ला अदालत बैतडीमा मुद्दा दर्ता गरिन् । श्रीमान्बाट मासिक ६ हजार पाउने गरी मुद्दाको फैसला भयो ।
अहिले उनी कानूनी अधिकार पाएपछि आफ्नै घरमा रमाएर बसिरहेकी छन् । न्याय पाउदा जिन्दगी खुशी भएको अनुभव उनको छ । उनी भन्छिन्, ‘हिंसा सहेर आफैलाई मारेर बाँच्नुभन्दा हिंसाको डटेर सामना गर्नुपर्छ । आफ्नो अधिकारका लागि आफैले बोल्नु पर्ने रहेछ ।’
यी तीन पात्र जस्तै पछिल्लो समय हिंसामा परेका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच बढेको । उनीहरूले न्यायसंगै खुसी पनि पाउन थालेका छन् । हिंसाविरुद्ध कडा संर्घषका बीच जीवनलाई सुन्दर बनाउन सफल भएका छन् ।
४/५ वर्ष अघिको तुलनामा अहिले महिला हिंसाका घटनाहरू सम्बन्धित निकायमा जाने क्रम बढेको छ । पहिले हिंसामा परेकालाई खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले हिंसापीडित स्वयं खुलेर न्यायका लागि बाहिर आउने गरेका छन् । यसर्थमा हिंसापीडितको संख्या बढ्नु भनेको हिंसाका घटना बढे भन्न नमिल्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
यूएनएफपीएका जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत गणेश शाही समस्या लुकाएर बस्नेहरू बाहिर आउन थालेपछि हिंसा बढेको देखिए पनि यसलाई हिंसा बढ्यो भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पीडितले आफ्नो अधिकारका लागि बोल्दा दुःखलाई जितेर खुशी साट्न पनि पाएका छन् । यो निकै सकरात्मक पाटो हो ।’ यसो हुनुको पछाडि संघसंस्थाहरूका जनचेतनामूलक कार्यक्रमसंगै संञ्चार माध्यमको देन हो भन्छन् उनी ।
समाजमा चेतना बढेपछि घटनाको उजागर हुने क्रम बढेको बैतडीबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सांसद लिलाधर भट्टको बुझाई छ । महिलाहरूले आफूमाथी भएका घटना उजागर गर्न थालेपछि उनीहरूको न्यायका पहुँच पनि बढेको भट्ट बताउँछन् ।
२०७३ भदौ ३० गते जिल्लाको पाटन नगरपालिकामा स्थापना भएकोे सेफ हाउसबाट अहिलेसम्म १ सय ८१ जना महिलाले सेवा पाएका छन् । उनीहरूको विभिन्न किसिमले पुनस्र्थापना पनि भएको छ । कसैले कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् भने कसैले आफ्नै व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
२०७५ वैशाखमा जिल्ला अस्पतालमा स्थापना भएको ओसीएमसीबाट पनि अहिलेसम्म १ सय १५ जना लंैगिक हिंसा प्रभावितले सेवा लिइसकेका छन् । सेवा लिने सबै महिला रहेको जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख ओसीएमसी प्रतिनीधी डाक्टर बसन्तराज जोशीले बताए ।
स्वास्थ्य जाँच गर्नेदेखि लिएर प्रहरी, सरकारी वकिलसम्मको व्यवस्थापन आफूहरूले गर्दै आइरहेको उनले सुनाए । हिंसा पीडितहरू खुलेर बाहिर आउन थालेपछि हिंसामा पर्ने महिलाको संख्या बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ३ सय २२ महिला हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेय भन्छन्, ‘महिलाले हिंसा सहेर बस्न हुदैन भनेर थाहा पाइसकेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो ।’
हिंसा पीडित महिलाहरू न्यायिक समितीमा पनि आउने क्रम बढेको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी न्यायीक समिती संयोजक पार्वती कार्कीले बताइन् । ‘हिंसा सहेरै बस्नु पर्छ भन्ने गलत बुझाईबाट दिदीबहिनीहरू माथी उठ्न थालेका छन्’उनले भनिन्, ‘समस्या आएपछि पो समाधानको लागि बाटो खोजीने हो । अहिले यो क्रम चलिरहेको छ । महिलाले हिंसा सहेरै बस्नु भन्दा आवाज उठाउन पर्छ । आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि बोल्नु पर्छ । अनिमात्रै समाज हिंसामुक्त हुन्छ ।’
(पत्रकार शाही कान्तिपुर दैनिकका बैतडी समाचारदाता हुनुहुन्छ ।)